Ko kana iwe ukatambira 502 yekukanganisa meseji?
Paunenge uchitsvaga chero saiti kana mapeji paInternet, kana iwe uchinge wawana akasiyana masisitimu pachiratidziro cheyako tarisa, 502 yekukanganisa meseji inogona kuoneka. Nekudaro, iwe hau ...
Nhasi uno vanhu vazhinji vanoenda online kuburikidza nemagetsi gadget - mapiritsi, nhare, mune izvi, saiti optimization iri kusvikawo padanho nyowani. Kana mushandisi akashanya akaona kuti saiti ...
Passive mari paInternet inyaya inonakidza kwazvo kune vazhinji vakambotsvaga mukana wekuwana mari pamhepo. Imwe yenzira dzekugadzira mari yakadaro ndeyemari yemigodhi. Kwete, kutaura ...
Mubvunzo wakakosha: maitiro ekugadzira rakapfigwa boka "VKontakte"?
Nhasi, vanhu vazhinji, kunyanya vechidiki chizvarwa, vanosarudza kutaurirana chaiko kune chaiko. Muzviitiko zvakawanda, chikamu chakakura chevagari vemunyika vanoshandisa mikana yenzanga dzemagariro. Inonyanya kufarirwa mune ino kesi ndeye VKontakte. ...
Kugadzira Yandex mail muAptlook: tsananguro
Kugadzira Yandex mail muAptlook haina chero chinhu chakaomarara, uye kana iwe usingazive magadziriso akakodzera, tinokurudzira kuti uverenge chinyorwa ichi. Kana iwe…
Maitiro ekuvhurira peji pane Odnoklassniki iri nyore uye yakapusa
Masocial network nzvimbo dzakakurumbira mazuva ano. Masocial network, kuwedzera kune zvekungovaraidza mabasa, anotakura akawanda mikana yekutaurirana. Hazvifadzi here kutarisa munhu waun ...
Maitiro ekuodha kubva kuTaobao - yakadzama mirayiridzo. Chinese chitoro "Taobao": wongororo uye kuendesa
Chinese inozivikanwa semutauro wakaomesesa pasi rino, asi munhu wese anoita kunge anoziva izwi rekuti "Taobao". Ichi chakanyanya hofori, musika pamusika pane akawanda zvitoro zvepamhepo. Vanhu vanoziva vanogona kukuudza maitiro ekuodha ...
Nokukurumidza kana gare gare, chero mushandisi wenetiweki anozoona kuti ndeipi traffic paInternet. Kazhinji, isu tichaedza uye isu tichataura nezve iyi pfungwa. Internet traffic ndiyo huwandu hweruzivo, zvese zvinobuda uye ...
Internet commerce iri kukura nekukurumidza, uye mazhinji emabhizimusi eRussia eInternet emabhizimusi ari kuyedza kwete chete kuvhara misika yekumba, asiwo kushanda nevatengi vekunze. Ehezve, izvi zvinoda kugona kwete kwekungoshandisa American kubhadhara ...
Maitiro ekunyoresa mu "Maila": mirairo yevanotanga
Nhasi tichadzidza kunyoresa neMail. Kazhinji, kune vashandisi vemberi, hapana chakaoma mune iyi nyaya. Uyezve, ivo pachavo vanogona kutsanangura chirevo chekunyoresa kune chero munhu, uye zvakare kubatsira ...
100% nzira yekubvisa nayo "QIWI" chikwama
Iwe unogona kuwana mamirioni eongororo pane iyo QIWI yekubhadhara system paInternet. Uye kwete ese akanaka, kunyangwe iri nyore kunyoresa maitiro. Mubvunzo wakakurumbira uye wekupedzisira pakati pevashandisi ndewekuti "Sei ...
Panharaunda yenyika yedu, mutungamiri pakati peinjini dzekutsvaga anogona kunzi chirongwa chemumba "Yandex", icho kambani yepasi rese "Google" iri kurwira nekusingaperi kodzero yehukuru. Ngatione kuti zvinhu zviri sei munzvimbo ino ...
Kana iwe uchidudzira chaizvo izwi iri kubva kuChirungu, zvinoreva kuti "anopopota". Ngatiedzei kurerutsa tsananguro. Screamer - chii ichocho? Chaizvoizvo, aya mavhidhiyo ane akafanana mamiriro ekuvandudza. Kutanga pa ...
Bhuku rechiratidzo ndi ... Kugadzirwa kwebhuku rebhuku. Brand bhuku kusimudzira
Iko kukosha kwekuvandudza kubatana kwehukama kuzivikanwa kuri kuwedzera nekuwedzera kunzwisisa pakati pevanamuzvinabhizimusi. Kuzivikanwa kwekambani nezviratidzo zvemakambani, mavara, logo zvinounza purofiti chaiyo. Kuti urege kuvimba nemukana, zvinodikanwa kuti unyatso shanda kuburikidza nezvose ...
Mukana wekugamuchira mari yakanaka kuburikidza neInternet inofarira vazhinji, kunyanya kune avo vane mamwe matambudziko nezvechivanhu basa. Zvikonzero zvacho zvinogona kuve zvakakosha kana kureba, asi hazvireve ...
Riley - unorevei? Nzira yekunzwisisa uye kushandisa?
Munguva pfupi yapfuura, Internet slang yatanga kuita nzira yayo kunyangwe mukutaurirana kwevanhu, uye vamwe vanopindirana (kunyanya vechidiki) vangangoda kuti kwete "maita henyu" kana "titende", asi ingoti ...
Chii chinonzi kudzokorodza? Mhando dzekudzokorodza
Izvo zvinoitika kuti mushure mekushanyira saiti, mushure mechinguva, kana uchishanda zvekare paInternet, kushambadzira kwezvinhu izvo uye masevhisi akaonekwa nemushandisi. Maitiro ekuona izvi: kusangana kana kutambudzwa? Aihwa,…
Nhasi kune huwandu hwakawanda hwesaiti, nekuda kwekuti iwe unogona kuodha kana kubhururuka nendege nekutakura kumba. Imwe yeiyi tikiti.ru, wongororo dzayo dzakazara nekurumbidza, ...
Tsvaga pane ino saiti kuburikidza neGoogle uye Yandex. Saiti yekutsvaga script
Kana zviwanikwa zvako zvikazadzikiswa neruzivo rutsva, nekukurumidza zvinoita kuti kuve kwakakosha kurongeka kwakatsvaga. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekuti ungaita sei izvi. Iyo yekutanga nzira inoratidza kushandisa yakavakirwa-mukati maturusi eCMS yako. Chepiri…
Isu tajaira kutenga zvemagetsi pamhepo. Gore rega rega vanhu vazhinji uye vazhinji vari kuchinjanisa nekutenga pamhepo, vachiziva kuti paInternet unogona kutenga zvinhu zvakafanana pakuburitsa kwakakura. Zvakare, pano ...
Mibvunzo ye49 mu database yakagadzirwa mu 3,191 masekondi.